Somaliland iyo Puntland oo walaac ka muujiyay maamulka Cusub ee Khaatuma. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Somaliland iyo Puntland oo walaac ka muujiyay maamulka Cusub ee Khaatuma.
Somaliland iyo Puntland oo walaac ka muujiyay maamulka Cusub ee Khaatuma.
Maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa si kala duwan uga hadlay doorashada Cali Khaliif Galeyr ee madaxweynenimada ee maamulka
Labada maamul ayaa midba goonidiisa waxa uu si cara leh uga jawaabay hoggaanka cusub, Somaliland aya sheegtay in uu yahay maamulka Khaatumo mid ka dhex hurinayo colaad dadka walaalaha ah ee degeenkaas.
Waxa ayna Somaliland intaas ku dartay in dhulkaasi uu ka tirsan yahay Somaliland, iyadoo digniin cullus u jeedisay maamulka Khaatumo.
Puntland ayaa dhankeeda, ayaduna shaaca ka qaaday walaaca ay ka qabto maamulka Khaatumo, waxa ayna sheegtay in deeganadaasi ay ka mid yihiin maamulka Puntland.
Hase yeeshee, Madaweynaha cusub ee maamulka Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeyr, ayaa waxa uu sheegay isagaa oo ka jawaaabyay walaaca ay muujiyeen Somaliland iyo Puntland, ayaa waxa uu caddeeyey in ay dadka Khaatumo xaq u leeyihiin in ay dhistaan maamul u gaar ah sida Somaliland iyo Puntland ba ay u dhisteen maaamul ugaar ah.
Waxa uuna intaas sii raaciyay, in sababta ay maamuladaasi u diidanyihiin Khaatumo ay tahay midnimada Soomaaliya oo ay u taaganyihiin reer Khaatumo.
Ugu danbeyntii, khubarada ku xeel dheer arrimaha Siyaasadda ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in dhibaatada Khaatumo ka soo gaari doonto Somaliland iyo Puntalnd ay dhaawici karto jiritaanka Somalialnd iyo Puntland in kasta oo labada maamul aysan ka mideeysneyn arrimaha Khaatumo.
Halka sidoo kale, laga cabsi qabo in arrintu ay circa isku shareerto haddi xukuumadda maxadaxweyne Xasan Sheikh ay u aqoonsato maamulka khaatumo sida maamulada kale ee dalka.
Previous article65 Ruux oo caanka ah Muqdsiho oo Hub ka dhigis lagu sameynayo